के तपाईंलाई पनि मृत्युको डर लाग्छ ? यसलाई कसरी हटाउने ? – ramechhapkhabar.com
के तपाईंलाई पनि मृत्युको डर लाग्छ ? यसलाई कसरी हटाउने ?
जीवनको सबैभन्दा ठुलो हार हो मुत्यु । मुत्यु यसकारण सबैभन्दा ठुलो हार हो, किनभने यो जीवनको अन्त्य हो । जीवन मृत्युपछि समाप्त हुन्छ । त्यसैले यो भन्दा ठुलो हार के हुन सक्छ ? त्यसैले सबै मानिसलाई मृत्युदेखि डर लाग्छ ।
मृत्युसंग किन डर लाग्छ ?
मृत्युको भय सबैका लागि एकै किसिमको हुँदैन, किनभने यो सबैका लागि एकै किसिमको हार हुँदैन । धेरै मानिस मृत्युपछि जीवनको लक्ष्य पुरा भएको छैन भनेर डराउँछन् । त्यस्तै धेरै मानिस मृत्युसंग कुनै पूण्यको कर्म गरेको छैन अथवा गरेको भए पनि कम छ, पाप धेरै गरेको छु भनेर मृत्युसंग डराउँछन् ।
कोहि व्यक्तिमा मृत्युबाट डराउनुको कारण मृत्युको दूत अति डर लाग्दो हुन्छ भन्ने पनि छ ।
कोहि व्यक्ति मृत्युबाट डराउनुको कारण अन्तिम संस्कारको कर्मले उनीहरुको मनमा भय उत्पन्न गराउँछ, जस्तै चितामा जलाउनु, गाड्नु जस्ता कुराहरु सम्झँदा पनि मन भयभित हुन्छ । मृत्युको डर आफूमा कति जना व्यक्ति आश्रित छन् भन्ने कुराले पनि हुन्छ । व्यक्तिलाई आफ्नो मृत्युपछि उनीहरु सबैको जीवन तहसनहस हुन्छ भन्ने भयले सताउँछ ।उनीहरुले टुहुरो जस्तै जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने भय पनि हुन्छ ।
मृत्युको भयलाई कसरी समाप्त पार्ने ?
यदि उपरोक्त भयमाथि विजय प्राप्त गऱ्यो अथवा मनलाई सम्झाउन सफल भयो भने मृत्युको भय समाप्त गर्न सकिन्छ । जस्तै यदि तपाईंले ईश्वर अथवा भगवानको दयामा विश्वास गर्न थाल्नु भयो भने मृत्यु पछिको जीवनबाट हुने भय कम हुन्छ, जसरी मृत्युको दूत अन्तिम संस्कार, देवदूतको भय अथवा नर्कमा सजाय पाउने भय मेटिन्छ ।
तपाईं ईश्वरमा आस्था राख्नु हुन्छ भने तपाईंको मृत्युको भय धेरै हदसम्म मेटिन्छ । पूँजीवादबाट सञ्चालित यो संसार, जसमा हरेक काम पैसाबाट नै चल्छ ।
यस्तो अवस्थामा मृत्युको भय इन्स्यूरेन्स कम्पनीको प्लानले कम गर्छ अथवा सरकार अथवा कुनै संस्थाबाट प्राप्त हुने उपदानले पनि मृत्युको भय कम गर्छ ।
यहि कारणले जीवनका लागि जोखिम भरिएको काम गर्नेहरुलाई बढि उपदान अथवा उसले त्यो काम गर्दा मृत्यु प्राप्त भयो भने उसको परिवारलाई अनुकम्पा नियुक्ति दिइन्छ ।
यहि कुराले गर्दा मानिस जोखिमले भरिएको काम खुशी खुशी गर्छन् । कहिलेकाहिं मानिसको जीवन मृत्युभन्दा पनि कठिन लाग्छ र उसले मृत्युलाई अंगाल्न पुग्छ । जीवनबाट डराएर अथवा हार मानेर भाग्ने कारणले नै महापुरुषहरुले आत्महत्यालाई कायरता भन्ने गर्छन् । यदि यसलाई महिमा मण्डित गरिने हो भने आत्महत्या महामारी जस्तै फैलन्छ ।
मृत्युबाट यदि महानता प्राप्त हुन्छ अथवा आउने पुस्ताको भविष्य सुधारिन्छ र त्यो पुस्ताले उनीहरुको बलिदानलाई कहिले नबिर्सनले वचन दिए भने पनि मृत्युको भय समाप्त हुन्छ र व्यक्ति बलिदानका लागि तयार हुन्छ । यी कुराहरु राम्रासंग बुझेमा मृत्युपछिको डर कम हुन्छ ।